FBC - Ityoophiyaan fudraa fi mudraarraa 1% qofa gabaa alaaf dhiyeessaa jirti
Ityoophiyaan fudraa fi mudraarraa 1% qofa gabaa alaaf dhiyeessaa jirti
Finfinnee, Hagayya 4, 2009 (FBC) –Ityoophiyaan lafa jallisiin misoomau heektaara miiliyoona 5.4 ol qabaattus, fudraa fi mudraa amma eegamu oomishuun fayyadamaa hin jirtu jedhame.
Oomishti fudraa fi mudraa %99.6 fedhii biyya keessaaf akka oolu qorannaan damicharratti gaggeeffame ni muul’isa.
Ministeerri Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa tarsiimoo haaraa qopheessuun fayyadamtummaa damichaa guddisuuf hojjechaa akka jiru eerera.
Ministeerichatti ogeessi olaanaa hoortiikaalchara xixiqqaa obbo Waalee Geetaanah oomisha fudraa fi mudraarraa gabaa alaattuu erguun fayyadamtummaa biyyattii guddisuun ni danda’amaayyu jedhan.
Meeksikoon gabaa addunyaatif avokaadoo 50% kan dhiyeessitu ta’us, humni damichaan qabdu garuu amma Ityoophiyaa hin ga’u jedhu.
Misooma fudraa fi mudraa gabbisuuf proojaktiin haaraan qophaa’ee hojiirra oolaa kan jiru yammuu ta’u, bara kana qofa ooyruu qonnaan bulaarraa tooniin 11 ol sassaabuun gabaa alaatif ergameera jedhu obbo Waalen.
Gargaaraan addaa ministeera Ministira Qonnaa fi Qabeenya Uumaamaa obbo Salamoon Daanyee gama isaanitiin, biyyattiin lafa jallisiin misoomu heektaara miiliyoona 5.4 fi qabeenya bishaanii ga’aa qabaattus amma fayyadamuu qabdu hin fayyadamne jedhan.
Kanaaf ammoo gabaa addunyaa keessa galuuf caalman hojjechuu qabdi jedhu.
Bara 2008 qofa Ityoophiyaan fudraa fi mudraa qindaa’ee fi hin qindaa’in toonii kuma 94 ol Sudaanii galchuu ishee ragaan ministeerichaa argame ni muul’isa.
Qullubbii toonii kuma 77 ol Sudaanii galchuunis Doolaara miiliyoona 15.5 ol baasti.
Amma ammaatti qonnaan bultoonni Ityoophiyaa miiliyoonni 1.5 ol oomisha fudraa fi mudraarraa fayyadamoo ta’aa jiru.
Oduuwwan Biroo « Qabeenyi dhaabbilee faaynaansii mootummaa Birrii biiliyoona dhibba 5 fi biiliyoona 23 qaqqabe	Proojaktoonni jajjaboon biyyattiin ijaartu amma galii argamsiisuu eegalanitti liqaan mootummaan fudhatu dhala xiqqaan akka ta’u beeksise »